प्रकाश सपुतले देखेको, ‘डाक्टर फूलमाया विश्वकर्मा’को सपना ! – Mission
प्रकाश सपुतले देखेको, ‘डाक्टर फूलमाया विश्वकर्मा’को सपना !
प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २८, २०७८
नेपाली हिन्दु नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकिदै छ । तर कोरोना कहरका बीच नेपाली गीत संगीत क्षेत्र तीजमय बनिसकेको छ । अहिले दैनिक जसो तीजका विभिन्न पाटाहरु समेटिएर गीत रिलिज भइरहेका छन् । विश्वभर झै नेपाली समाजमा समेत प्रविधिको बढ्दो माग र लोकप्रियतासँगै क्यासेटको जमाना लोप भइसकेको छ । अहिले गीत संगीतको लोकप्रियता मापन गर्ने प्रमुख आधार युट्युब बनेको छ ।
अहिले दैनिकजसो करिब आधा दर्जनजसो गीत रिलिज भइरहेका हुन् । नेपालको मौलिक पर्वको रुपमा रहेको तीजका नाममा गीत संगीतमा विकृति र विसंगती पनि भित्रिएको आरोप गीत संगीत क्षेत्रले भोगिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा दुर्गेस थापाको विवादलाई लिन सकिन्छ । उनले दुई हप्ता अघि बजारमा ल्याएको ‘बीच्च बीच्चमा–४’ मा समावेश गरिएको ‘ख्यास्स पुलती’ शब्दलाई लिएर दुर्गेसलाई राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले सदस्यबाट हटाउने सम्मको निर्णय गरेको छ । यसको दुर्गेसले प्रतिवाद गरिरहेका छन् । यो त एउटा उदारहण मात्रै हो, पछिल्लो समय कलाकारिता क्षेत्रमा खासगरी गीत संगीत विकृति मौलाएको छ । यस विषयमा बृहत बहस र छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
दर्जनौ गीतहरुको भीडमा साउन २२ गते एउटा गीत बजारमा आयो ।गीतको मूल शीर्षक छ,‘कुरा बुझ्नु पर्च’ । यसको शब्द, संगीत र निर्देशन प्रकाश सपुतले गरेका हुन् । यो गीतको अहिले खुवै चर्चा छ । प्रकाश सपुतको यो गीत २२ गते देखि नेपालको युट्युब टे«निङको एक नम्बरमा छ ।यो गीतलाई लिएर मिडियामा विभिन्न विषयमा बहस भइरहेका छन् । यसका विभिन्न र बाटा र पाटाहरुलाई समेटेर गीतको विषयामा समिक्षा समेत भइरहेको छ । प्रस्तुत आलेख पनि यसै गीतसँग सम्बन्धित हुनेछ ।
समग्रमा यो गीतको बारेमा सकारात्मक रुपमा चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । प्रकाश सपुतको शब्द सिर्जना रहेको गीतको चर्चा नहोस पनि कसरी ? पहिलो कुरा तीज गीतका नाममा बजारमा आइरहेका तान्डव नृत्य, ताई न तुई शब्द र पात्रको प्रयोग लगायतका संगीत भन्दा ‘कुरा बुझ्नु पर्च’ पृथक छ । सर्वप्रथम त प्रकाशले यो गीतलाई तीज गीत भनेपनि यसलाई ‘शसक्तिकरण गीत’ भन्दा अतियुक्ति नहोला । शसक्तिकरण यस अर्थमा की, प्रकाश कै शब्द सापटी लिने हो भने यो उमेरका कुरा, सपनाका कुरा, आत्मविश्वासका कुरा, मायाका कुरा, रहरका कुरा, भविष्यका कुरा कुल गर्ने एक फूल प्याकेटको क्लाइमेक्स हो ।
अहिले नेपाली गीत संगीत क्षेत्रमा प्रकाश सपुत एउटा पृथक ब्राण्ड बनिसकेको छ । पछिल्लो तीन चार वर्षको अवधीमा प्रकाशले दोहोरी ब्याटलदेखि ‘कुरा बुझ्नु पर्च’ सम्म आइपुग्दो उक्त कुराको प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
प्रकाशले दोहोरी ब्याटलमा अहिलेका युवा पुस्ताको आवाज बोलेर सांगितिक पृथकताको प्रयोग गरेका थिए । पछि ‘बोल माया’ मा नेपालको ग्रामीण परिवारको घर, परिवार र समाजमा बैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको दुखान्त बोले । त्यसैगरी ‘गलबन्दी’मा उनले मौलिक ढंगले सुन्टर ढंगले प्रस्तुत गरे । ‘बोल माया’मा आँशु लेखेका उनले ‘गलबन्दी’ मार्फत मौलिक गीत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिए । सपनै सपनाले भरिएको उनको कला, पृथकता र प्रयोग र समस्या उजागर गर्ने कलमरुपी यात्रा यति मै सीमित भएन ।‘बदला बरी लै’मा नारीमाथि हुने अन्याय, बलात्कारको सिकार भए अनाहकमा मृत्युवरण गर्न गरिरहेका युवतीहरुलाई बदला लिन अभिप्रेरित गरे । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका विरुद्ध नारीहरु आफैले बदलाको भावमा मैदानमा उत्रिनुपर्ने खुल्ला आह्वान थियो, प्रकाशको ।यो अहिलेपनि न्याय नपाएका निर्मला पन्तहरुले भोगिरहेको कथा समेत हो ।
‘फुटेका चुरा’ हुँदै ‘मेरो पनि होइन र यो देश’? सम्म आइपुग्दा ‘प्रकाश सपुत’ नामले मात्रै होइन कर्म, सिर्जना र प्रयोगका दृष्टिले वास्तविक ‘सपुत’ प्रमाणीत भइसकेका छन् । मेरो पनि होइन र यो देश’ मा प्रकाशले सीमान्त, पिछडिएको वर्ग, समुदाय र अनागकका कथा व्यथा सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।
पछिल्लो गीत ‘कुरा बुझ्नु पर्च’ प्रकाश ‘सपुत’ हुुनुको अर्को प्रमाण हो । यस गीतमा उनले एक होइन अनेक विषय उठाएका छन् ।उनले महिलाहरुको पारिवारिक विषय उठाएका छन् ।महिलाको दाम्पत्य जीवन धन र माया दुवै कुराको सम्मिश्रणबाट सफल हुने सन्देश दिएका छन् ।
परिवारमा छोरो हुनैपर्ने आम नेपाली मानसिकतालाई चुनौती दिँदै उनले बहुछोरी भएको परिवारको कथाबाट गीत सुरु भएको देखिन्छ ।जहाँ जेठी छोरी र माइली छोरी भान्सामा माया र धनको विषयमा कुरा गर्छन् ।
प्रकाश सपुत युट्युबाट बजारमा ल्याइएको यो शीत यो लेख तयार पार्दासम्म ३७ लाख ६ हजार ३५ पटक हेरिएको छ । पहिलो दिनदेखि नै यो गीत नेपालको युट्युबको टे«निङमा छ ।
प्रकाशले यो गीतको सुरु मै आफ्नो छोरीसँगैको फोटो राखेर ‘छोरी र छोरीहरुका लागि…’ श्लोक अर्थपूर्ण छ । यो गीत उनले आफ्नो छोरी प्रवृष्ठिको बालापन, चञ्चलेपन र सौखहरुलाई चित्रण गर्दै किशोरी र युवतीहरुसँग रुपान्त्रण गरेर गीत लेखेका छन् । यो तीजको गीत नै हो भन्ने पुष्टि गर्न पनि खोजिएको छ । तीजको आगमन भएर मोइला गएका छोरी घर आउँदा आमामा हुने खुसीको संवादबाट यो गीतको कथा सुरु हुन्छ । यसैमा दुइ दिदि बहिनीहरुले नेपाली महिलाका भिन्न सोच प्रतिबिम्बित गरेका छन् । खासमा वैवाहिक जीवन र धन र मायाले मात्रै पूर्ण हुँदैन । दाम्पत्य जीवन पूर्ण हुन धन र मायाको उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
गीतमा मनमायाको रुपमा स्वास्तिमा खड्काले अभिनय गरेकी छन् । उनलाई मनमायाको क्याक्टरमा खुब सुहाएको छ । घरभित्र दिदी र आमाले गरेको कुरा ढोकाबाट सुनिरेकी मनमाया उक्त कुरा सुनाउन दौहिएर आफ्नो साथीको जान्छिन् । उनकी साथी धारामा भाँडा माझिरहेकी छन् ।
गीतको सुरुवात मै शान्ति श्री परिवारको स्वरमा रहेको यस्तो गीतको हरफबाट गीत सुरु हुन्छ ।
‘एक फूलमाया यता आइज, एउटा कुरा सुन्त
इति राम्रो जोवन लान,को आउने कुन्त’
मनमायाकी साथी फुलमायाले भन्ने पहिलो हरफमा बाल गायिक समिक्षा अधिकारीले स्वर दिएकी छन् ।
‘कस्तासँग हुने होला, हामी दुईको विहे हइई
सम्झिदा नी सर्म लाउँछ न जिस्का न छ्या हइई’
प्रस्तुत गीतमा मनमाया(स्वस्तिमा खड्का) र फूलमाया( आँचल शर्मा) आम युवतीको किशोरावस्था, चञ्चलता र सपना बोल्ने पात्र हुन् । बाटोमा हिड्दै गर्दा एउटी बुढी आमालाई लड्दा सहयोग गरेर आर्शिवाद थापेर फेरी कुद्छन् । यस्तो अवस्थामा मनमाया र फूलमायाले ग्रामीण समुदायमा हुर्किरहेका युवतीहरुको गर्छन् ।
पसलमा पुग्दा एउटा ठिटोले आँखाको कर्के नजरले माया प्रदर्शन गर्छ । उनीहरुको आफूलाई आवश्यक वस्तु किनेर फर्किन्छन् । तर बीच मै फेरी फर्किएर फूलमायाले ती केटाको सुरुवाल तल झारीदिन्छन् । यो दृष्य युवतीहरुको चञ्चलताको चरम रुप हो । यो ग्रामीण समुदायका युवतीहरुले गर्न नसक्ने काम हो । यसमा प्रकाशले अलि ध्यान दिएका छैनन् ।
लगत्तै दिदीबहिनी भेट भएर रमाइलो गर्छन् । त्यसपछि भने युवतीहरुमा भित्राभित्रै गुम्सिएर रहेको बिहे सपना दुवै जना रमाइलो पारामा प्रस्तुत गर्छन् । पछिल्लो समय समलिंगी विवाहको समेत क्रम बढिरहेको छ । यसमा उनीहरु शहरीया युवतीको अवतारमा प्रस्तुत हुन्छन् । एउटै पात्रलाई दोहोरो चरित्रमा प्रस्तुत गरिनु यो गीतको अर्को विशेषता हो । सुरुदेखि नै युवती, महिला र वैवाहिक जीवनलाई शिलशिला बनाएर अघि बढेका प्रकाश श्रीमानले रक्सी नै न खाओस तर खानै परे आफूलाई पनि चखाओस भन्ने फरकमा चुकेका छन् ।
एक युवतीमा हुने सपना ह्याण्डसम श्रीमान र विहे पूर्व हुने भर्जिनिटीको संवादमा पुरुष पात्र भन्दा महिला पात्रलाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो पनि एउटा सकारात्मक सन्देश हो ।
लगत्तै महिला महिलाहरुमा समनताको कुरा पनि उठाइएको छ । नेपाली समाजमा सासुले बुहारी र बुहारीले सासुलाई समान समान रुपमा हेर्नुपर्ने र जन्मान्तर, बध्याकरण गर्नुपर्छ भन्दै सन्तान उत्पादनमा समेत महिलाहरुको हक हुनुपर्छ भनिएको छ ।
श्रीमतीले श्रीमानको खुट्टा ढोक्नुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ । यो पुरानो चलन हो । नयाँ पुस्ताले यसलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा पनि देखाउँन खोजिएको छ । आफ्नो दिदीलाई भिनाले गर्ने हिंसालाई मनमायाले प्रतिवाद गर्छिन् ।
‘हाम्रो जीवन, हाम्रो विचार हाम्रै हुन्छ राइट
आफ्नो राइट पाउनलाई गर्नुपर्छ फाइट’
घर, समाज र जुनसुकै क्षेत्रमा आफ्नो अधिकारका लागि स्वयम हिंसा र थिचोमिचोमा परेको वर्ग तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ । यो गीतको यस हरफले महिलाहरुलाई आत्मबलका साथ हिंसा स्वीकार गर्न सुझाएको छ ।
यस गीतका मुल पात्र मनमाया र फूलमाया विभिन्न फरकमा विभिन्न सन्देश प्रवाह गर्छन् । यसमा फूलमाया र मनमायाको केमेस्ट्री गज्जब मिलेको छ । उनीहरुले आफ्नो जीवनको मात्रै सिंगो समाजको सपना बोल्छन् ।
यत्तिकैमा मनमाया भन्छिन्,
स्करसीपको फर्म भरिस् त ?
अह, सर्ट लिस्टमा प¥या छु । अब इन्टरभियूमा जान बाँकी छ ।
ललीपप चुस्दै फिल्मको जस्तो डाइलग बोल्दै मनमायाको हाउभाउ सहित भन्छिन्,
वाह ! मेरो साथी पनि डक्टर, ‘डक्टर फूलमाया विश्वकर्मा’
यो संवाद पहिलो कुरा त महिला शसक्तिकरणसँग जोडिएको छ । अर्को कुरा महिला सधै चुलोचौकोमा मात्र सीमित होइन डाक्टर बन्न सक्छन् भन्ने कुरा देखाइएको छ । अझ यसको पात्र फूलमाया विश्वकर्मालाई पात्र बनाइनुने सुनमा सुगन्ध थपेको छ । नेपाली समाजमा बहिस्करणमा परेका महिला त्यो दलित कथित दलित समुदायमा जम्मेर आर्थिक रुपमा विपन्न युवतीहरुमा लुकेको डाक्टर बन्ने सपनाको लुकेको आवाज हो । हो साँच्चै यो देशमा सुत्केरीको व्यथा लाग्दा एम्बुलेन्स नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्नेहरुले डाक्टर फूलामाया विश्वकर्माहरुको माग गरिरहेका छन् । राज्यलाई सोच्न बाध्य बनाउन यो हरफले । प्रकाश सपुतले देखेको डाक्टर फूलामाया विश्वकर्माको सपना उनको स्वैरकल्पना मात्रै होइन । यो युगको माग र आवश्यकता हो ।
फूलमाया फेरी सोध्छिन्,
अनी त नि के भयो तेरो
मनमाया भन्छिन्, म त आर्मीमा भिड्ने हो यार, सेकेण्ड लेप्टिनेन्ट ।
फूलमाया नामक पात्रले बोलेको ‘मेरो साथी नै लेप्टिनेन्ट, लेप्टिनेन्ट मनमाया क्षेत्री’ भन्ने संवादले प्रहरी र सेनामा क्षेत्री पुरुष मात्रै हुन्छन् भन्ने कुरालाई चुनौती दिएको छ ।
गीत अन्त्यमा वैवाहिक सम्बन्धमा होस या प्रेम सम्बन्धमा महिलाहरुको प्राकृतिक नियमको रुपमा रहेको महिनावारीलाई पुरुषले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ । यसमा प्रकाश स्यवम् मनमायाको प्रेमीको रुपमा झुलुक्क तर अर्थपूर्ण पात्रका रुपमा देखा परेका छन् । सन्दशै सन्देशले भरिएको यो गीतले गीतको माध्यमबाट सन्देश पनि प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो सन्देश दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २८, २०७८ 6:10:30 PM |
Prevलुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त
Nextनाग पूजा किन गर्ने ?